Ra’iisal Wasaare Kheyre oo kulan la qaatay qeybo ka tirsan bulshada Muqdisho + Sawirro – Balcad.com Teyteyleey
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo kulan la qaatay qeybo ka tirsan bulshada Muqdisho + Sawirro
Ra’iisal Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa caawa kulan gaar ah waxa uu la qaatay qeybo ka tirsan bulshada magaalada Muqdisho, waxaana kulankaasi oo ka dhacay Hotelka Maka Al-Mukarama looga hadlay xaaladda dalka.
Kulanka oo ay ka qeyb galeen madax horay xilal uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray, odayaal dhaqameed iyo xubno u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa Ra’iisal Wasaaraha waxay u gudbiyeen aragtidooda ku aadan isku xirka bulshada iyo Dowladda sida loo xoojin karo.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in xubnihii uu kulanka la yeeshay uu u caddeeyay inuu dalka nabad yahay, isla markaana loo baahan yahay sidii la isaga kaashan lahaa dowladnimada in dalka oo lagu faafiyo lagana qeyb qaato dhinacyada amniga, arrimaha siyaasadda iyo qodobo kale.
Kulankan ma aha markii ugu horeysay oo uu Ra’iisal Wasaare Kheyre la qaato bulshada Muqdisho, isagoona horay kulamo kala duwan ula qaatay qeybaha ay ka kooban yihiin bulshada sida dhallinyarada, aqoonyahanada, waxgaradka, haweenka iyo ururrada ka shaqeeya arrimaha bulshada.
The post Ra’iisal Wasaare Kheyre oo kulan la qaatay qeybo ka tirsan bulshada Muqdisho + Sawirro appeared first on Ilwareed Online.
Tahriibiye loo Gacan Geliyey Dowladda Soomaaliya (Dhageyso)